Siziintshatsheli ngoKumkanikazi - Izinto Zobugcisa
Ukumkanikazi okhokelayo kwimvumi uFreddie Mercury ubhale oku. Onke amalungu amane kaKumkanikazi anikele ngeengoma ezibethiweyo kwingqokelela yeqela. UBrian May ubhale lo mlingane wengoma, 'Siya Kukurwala.'
UFreddie Mercury wathi: 'Bendicinga ngebhola xa ndiyibhalayo. Ndifuna ingoma yokuthatha inxaxheba, into abalandeli abanokuthi banamathele kuyo. Ewe ndiyinike ubuqili ngakumbi kumdlalo weqonga kunakwingoma eqhelekileyo yebhola ekhatywayo. Ndicinga ukuba inokuthathwa njengenguqulelo yam ' Ndiyenzile Ngendlela Yam . ' Siyenzile, kwaye ngokuqinisekileyo bekungekho lula. Akukho bhedi yeentyatyambo njengoko ingoma isitsho. Kwaye akukabikho lula. '
Oku kukhutshwe njengecala eliphindwe kabini ngo-A kunye 'SiyakukuNgxwala.' Kwi-albhamu, ihamba ngokungagungqiyo ukusuka 'Siya kukuDibanisa,' ekhokelele kwidiski yokudlala iingoma kunye. Naxa iiCD zivumela ukuba iingoma zahlulwe, ezi ngoma zimbini zazidla ngokudlalwa kunye.
Oku kudla ngokudlalelwa kwimibhiyozo yoloyiso ngamaqela ezemidlalo, ngakumbi e-US. Oku kudlulela kwimikhosi yoloyiso ukongeza kwimibhiyozo yasentsimini, apho idlalwa rhoqo kunye noKool kunye 'noMthendeleko weQela.'
Kuba ingoma yabhalwa kuthatyathwa inxaxheba kubaphulaphuli, ayenzelwanga ukuba siqhayise egameni leqela - 'Sithi' kubhekiswa kuye wonke umntu ocula ngeloxesha. Kukwanjalo nakumlingane, 'Siyakuku rock.'
Ngo-1992, isikolo esiphakamileyo saseNew Jersey sanceda ukuvuselela le ngoma eMelika. Abafundi baseClifton, eNew Jersey bacele ukuyicula xa bethweswa izidanga, kodwa inqununu yenqaba kuba yayinxulumana noFreddie Mercury, owabulawa sisifo sikagawulayo kunyaka ongaphambili. Oku kukhokelele ekubeni abafundi bakhukule isikhululo sikanomathotholo saseNew York uZ100 ngezicelo zengoma, esi sikhululo siqale ukudlala ngovelwano ngezizathu zabo. Ukumkanikazi wayesele evuselelwe e-US ' ibohemian rhapsody , 'eyayisetyenziswa kwimovie Ihlabathi likaWayne , ngoko isibheno sabo kwisizukulwana esilandelayo sasicacile. 'Singabadlali beNtshatsheli' nabo babambekile, besenza ukuba inkampani yabo yokurekhoda iphinde ikhulule enye, eyenze # 52.
Oku kwasetyenziswa ekugqibeleni iikhredithi ze-movie ye-1992 Amadada anamandla , Kudlala uEmilio Estevez. Kwiminyaka emibini kamva, yadlalwa kwakhona kwiikhredithi zokugqibela, D2 , kwindawo apho iqela lixinene ngasemlilweni kwaye bacula ingoma. Ngenxa yoko, le ngoma yaduma ngakumbi kulutsha nakubantwana abadlala imidlalo. Umboniso bhanyabhanya wazala igama elitsha leqela le-NHL ngonyaka emva kokuba kwenziwe imovie yokuqala. Omabini la maqela (Amadada anamandla) kunye nomdlalo bhanyabhanya uphethwe yiDisney.
IBritney - iCalabasas, CA
Ngo-2001, amalungu kaKumkanikazi uBrian May noRoger Taylor barekhoda ingxelo entsha yoku kunye nemvumi yaseBritane uRobbie Williams. Le nguqulo yayisetyenziswa kwimovie Ibali likaKnight .
UGavin DeGraw wabhala oku kwi-albhamu ka-Queen Queen ka-2005 Ukumkanikazi obulalayo .
URachel-South Point, OH
Umqhubi weFomula 1 uFernando Alonso ucule le ngoma emva kokuphumelela i-Chinese Grand Prix ka-2005, ekhusela isihloko sabaQeqeshi kwiqela lakhe, iRenault. Iqela kamva lakhupha i-MP3 yengoma 'edlalwayo' yinjinjini ababeyisebenzisile ngelo xesha, kunye namanqaku ahlukeneyo adlalwayo ngokutshintsha isantya senjini ukulungelelanisa isandi senjini kunye nenqaku lokukhupha.
Kwiminyaka embalwa kamva ngo-2009, uJenson Button waliphinda eli qhinga xa waphumelela ubuntshatsheli bokuqhuba i-Brawn GP-ecula ingoma kunomathotholo kwithambeka lakhe lokuncipha kwi-GP yaseBrazil.
Le ngoma iboniswe ngentengiso ka-2014 yeAudi A3. Kule ndawo, abantu abadumileyo, kubandakanya umdlali weqonga uKristen Schaal kunye nompheki uDavid Chang, bacengceleza imigca evela kwingoma phambi kukaRicky Gervais yokuvula unomathotholo wemoto kwikwayara.
UDonald Trump wasebenzisa le ngoma kwiindibano zephulo xa wayebaleka ukutyunjwa kweRiphabhlikhi ngo-2016. Nge-8 kaJuni, uBrian May wathumela umyalezo kwiwebhusayithi yakhe, esithi, 'Ndiyakuqinisekisa ukuba imvume yokusebenzisa le track ayifunwanga okanye ayinikiwe. Sithatha ingcebiso ukuba ngawaphi amanyathelo esinokuwathatha ukuqinisekisa ukuba olu setyenziso aluqhubeki. Ngaphandle kwezimvo zethu kwiqonga likaMnu.Trump, bekuhlala kuchasene nomgaqo-nkqubo wethu ukuvumela uKumkanikazi umculo ukuba usetyenziswe njengesixhobo sezopolitiko. Umculo wethu ubandakanya amaphupha kunye neenkolelo zethu, kodwa yeyabo bonke abanomdla wokumamela nokonwaba. '
Ingoma ihambelana nomxholo kaTrump 'wokuphumelela,' kwaye esazi uMeyi ukuba akanasizathu sokumnqanda ekusebenziseni, uqhubeke nokwenza njalo, kubandakanya ne-18 kaJulayi xa wayisebenzisa njengomculo wakhe wokungena ngobusuku bokuvula kwiNdibano yeRiphabhlikhi. UCleveland. 'Siza kuphumelela kakhulu,' watsho xa ethatha imakrofoni.
UBrian May, uRoger Taylor kunye nomculi uAdam Lambert barekhode ingoma entsha yengoma yokuhlonipha abasebenzi abaphambili ngexesha lobhubhane we-coronavirus ka-2020. UKumkanikazi ukhuphe ingxelo entsha ekhuthazayo, ebizwa ngokuba ' Nina niziintshatsheli Nge-Epreli 2020, ngayo yonke imali eya kwi-Covid-19 Solidarity Response Fund ye-World Health Organisation.
Uluvo lwavela xa aba bathathu baphambukela kwingoma ekwi-Instagram kwaye uLambert watshintsha iingoma phakathi kwengoma wathi 'Niziintshatsheli.'
'Nina ziiNtshatsheli' yaba yinto enkulu eJapan, yabeka itshathi yelizwe yoSasazo loMdlalo woMoya woMhlaba.
Eli libali lentombazana eyalila umlambo
thixo othandekayo unethemba lokuba uyifumene ileta
indlela yobomi 9 ukuhambelana
xa ndandisengumfana utata wandithatha ndaya esixekweni
Ingelosi engamawele angama-222 ilangatye